सडकमा नेपालगन्जको फड्को - Arthapage
सडकमा नेपालगन्जको फड्को
प्रकाशित मितिः ५ पुष २०७८, सोमबार ११:१० December 20, 2021
बाँके – नेपालगन्जको सबैभन्दा पुरानो बजारका रुपमा स्थापपित एकलैनी सडक फराकिलो बनेको छ । अत्याधिक भिडभाड हुने उक्त बजारका बाटाहरुमा मान्छे समेत छिर्न मुस्किल पथ्र्यो । सवारी आवागमन त पाँच सय मिटर परै निषेध
गरिन्थ्यो । पुरानो बजारको यस्तो सकस अहिले भने अन्त्य भएको छ ।
एकलैनी सडक फराकिलो बन्दा आवाजाहीमा सर्बसाधारणलाई सहज मात्र भएको छैन, साँघुरो बाटोका कारण आफ्नो इतिसाह जोगाउन हम्मेहम्मे परेको एकलैनीलाई राहतको श्वास फेरेको छ । सोही ठाउँका अग्रज व्यवसायी नन्दलाल बैश्य भन्छन्–‘यहाँको बाटो ठुला होला भनेर कसैले कल्पनै गरेको थिएन । निकै ठुलो मिहिनेत पछि अहिले ठुलो भएको छ । ’
एकलैनी मात्र होइन घरबारीटोलको अवस्था पनि उस्तै थियो । वडा अध्यक्ष सुनिलसिंह हमाल भन्छन्–‘बजार बढ्दै जाने तर बाटो जस्तोको त्यस्तै ! ठुलो कसरत गरेर बाटो बिस्तार गरियो अहिले घरबारीटोलको मुहार फेरिएको छ । ’
एकलैनी र घरवारीटोलको मात्र होइन नेपालगन्जका स–साना गल्लीहरुमा समेत फराकिला बाटाहरु बनेका छन् । पछिल्लो केही बर्षयता नेपालगन्जले सडक पूर्वाधारमा निकै ठुलो फड्को मारेको छ र्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना सामुदायिक विकास कार्यक्रमको साना भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत ७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ८७ वटा बाटो (१० किलोमिटर) पीपीसी सडक निर्माण गरेको थियो ।
एडीबीले दुई वर्षको अवधिमा नेपालगन्जमा मात्र १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सडकमा लगानी गरेको थियो । १ अरब ६३ करोड रुपैयाँमा ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र पक्की नाली बनायो । उपमहानगरले पनि सार्माथ्य अनुसार सडक पूर्वाधारमा लगानी गरेकै छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सडक निर्माण गर्ने स्थानीय तहमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नै बनेको छ । उपमहानगरमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारका साथै एसियाली विकास बैंकको गरी झन्डै सवा चार अर्बको बाटो बनाइएको छ । जहाँ जिल्लामै सबैभन्दा बढी ९० किलो मिटर त कालोपत्रे सडक नै बनेको छ । ४० किलोमिटर पीसीसी र २९ किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल र कच्ची सडक स्तरोन्नति (माटो पटान र इँटा सोलिङ ) भएको नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणा बताउँछन् । ‘अब झन्डैझन्डै सबै ठाउँमा सडक विस्तार भइसकेको छ।
सडक निर्माणमा कायापलट नै गरेको उपमेयर उमा थापामगर बताउँछिन् । नेपालगन्जको अधिकांश कालोपत्रे सडकको दुवै किनार वा एकापट्टि नाली पनि निर्माण गरिएको छ। तराईको पुरानो सहर नेपालगन्जमा गएको दुई वर्षमा भएको विकास र बजेट विनियोजन हेर्ने हो भने विकास भनेकै सडक जस्तो आभास हुन्छ । विगतमा साँघुरो बाटो र फोहोर मानिने नेपालगन्ज चिल्लो सडकले अहिले सहरको
मुहार नै फेरिएको छ ।
नेपालगन्ज मात्र होइन, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि सडक निर्माण उस्तै छ । जिल्लामा दोस्रो धेरै सडक निर्माण खजुरा गाउँपालिकामा भएको छ । खजुराले ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । १६ किलोमिटर कालोपत्रेको टेन्डर भइसकेको योजना शाखा प्रमुख दिलबहादुर पौडेल बताउँछन् । एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। हरेक वर्ष कम्तीमा पनि १६ किलोमिटरका
दरले खजुरामा कालोपत्रे सडक बनिरहेको छ। ‘हरेक वडाको सडक कालोपत्रे भएको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपती दाबी गर्छन्, ‘हाम्रो पाँचवर्षे कार्यकालमा एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य छ।’
यि दुई पालिका मात्र होइन जिल्लाका सबै जसो पालिकामा बाटो बनाउने
प्रतिस्पर्धा नै छ ।
वडा अध्यक्ष तहसम्म सडक पूर्वाधार निर्माणमा जुटिरहेका छन् । नेपालगन्ज वडा नं. १८ का वडा अध्यक्ष दिपक बर्माले सडक
निर्माण नगरेको सम्भवत ठाउँ छैन । उनले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो कार्यकालमा अभियान नै बनाएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहले झन्डै १० अर्बरुपैयाँबराबरको सडक निर्माण गरेका छन् । जिल्लाभरिको
कालोपत्रे, पीसीसी, ग्राभेललगायतको सडकको लम्बाइ ५ सय ४९.८०० किलोमिटर
अर्थात् ५ सय ५० किलोमिटर बनेको छ । ]
जुन संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेभन्दा पनि बढी हो । एडिबीकै सहयोगमा नेपालगन्जदेखि कोहलपुर सडक चारलेनको निर्माण भएको थियो । पश्चिमको लाइफलाइनका रुपमा रहेको उक्त सडक मर्मतको काम समेत शुरु हुन थालिसकेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण मात्र भएर नहुने त्यसको संरक्षण र पुन मर्मतको कामलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने सबैको सुझाव छ ।
प्रकाशित मितिः ५ पुष २०७८, सोमबार ११:१० |
Prevअत्याधुनिक प्रविधि जडानसंगै जटिल शल्यक्रिया गर्दै खजुरा क्यान्सर अस्पताल
Nextगुर्भाकाेट चिनाउने शुभाघाट मेला